Saron-tànana ho an'ny iPad na Mac | Vaovao IPhone
Saron-tànana ho an'ny iPad na Mac anao
Ny fonony vita tanana dia manome endrika manokana sy manokana an'ny iPad anao. Raha be dia be ny dia ataonao, tena ilaina ny fonosana kalitao.
En ny atrikasa Byrd & Belle, Ny fonony rehetra dia vita amin'ny tanana, miaraka amin'ny fitiavana sy ny fikarakarana, amin'ny loko tadiavinao ary natao ho anao manokana. Azonao atao atambaro ny loko fonony sy ny hoditra araka ny itiavanao azy ataovy ho anao tranga Mac ny haben'ny iPad, izay no nataoko.
Jereo ny antsipirian'ny seam na sombina hoditra hitondranao ny iPad eo ambanin'ny sandrinao, tazomina amin'ny tananao ary tsy ho simba amin'ny fikosehana sy ny hatsembohana.
Ny vidin'ny tranga iPad dia manodidina ny € 22, mazàna ny vidin'ny fandefasana dia 20 € eo ho any Espana, saingy nangataka fihenam-bidy amin'ireto sarany ireto izahay ho an'ireo mpamaky ary nolazain'izy ireo taminay fa Raha mifandray aminy ianao mitanisa ny bilaoginay dia afaka mangataka fomba fandefasana mora vidy ianao eo amin'ny 15 € eo ho eo (Na dia afaka tapa-bolana vao tonga). Andeha hojerentsika raha afaka mahazo kaody fihenam-bidy ho an'ny mpamaky ny Actualidad iPad izahay, raha mahaliana anao dia avelao aminay amin'ny toerana mifanentana ao amin'ireo hevitra ireo ny mailakao ary halefanay aminao raha vantany vao manana izany izahay.
Afaka mahita ny fonony rehetra ianao amin'ny pejiny ofisialy.
Tsindrio ny fifandraisana mba hangataka ny fandefasana mora indrindra natolony anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Saron-tànana ho an'ny iPad na Mac anao
PURO Booklet Slim Case ho an'ny iPhone 4 / 4S
Tranga iPhone, iPad ary iPod Touch vita tanana tsara tarehy